Zụrụ Testosterone Acetate ntụ ntụ nke ndị na - emepụta ya na ndị na - eweta ya - actorylọ ọrụ
Rao Testosterone Acetate ntụ ntụ bụ androgen na anabolic steroid na testosterone ester. Ọ na-eme ihe banyere ịṅụ ọgwụ nwoke na ọrịa ụfọdụ. O doro anya ma ọ bụrụ na iji testosterone maka obere ọkwa n'ihi ịka nká bara uru ma ọ bụ na-emerụ ahụ.
Rao Testosterone Acetate powder (1045-69-8) video
Rao Testosterone Acetate powder (1045-69-8) Nkọwa
Rao Testosterone Acetate ntụ ntụ bụ androgen na anabolic steroid na testosterone ester. Ọ na-eme ihe banyere ịṅụ ọgwụ nwoke na ọrịa ụfọdụ. O doro anya ma ọ bụrụ na iji testosterone maka obere ọkwa n'ihi ịka nká bara uru ma ọ bụ na-emerụ ahụ. A na-eji eriri Testosterone mee ihe dị ka gel ma ọ bụ ogwe nke na-etinye aka na akpụkpọ ahụ, injection n'ime muscle, mbadamba nkume nke etinyebere na ntì, ma ọ bụ mbadamba ụrọ nke ọnụ.
Testosterone Acetate ntụ ntụ bụ orrogen na anabolic steroid na testosterone ester. Rao Testosterone Acetate ntụ ntụ nwere nsị ngwa ngwa nke absorption n'ime ahụ ahụ na ndị ọzọ esters. Dịka ntụziaka n'ozuzu, ngwa ngwa / mkpụmkpụ nke ester, ọkwa dị elu maka PIP (nsị ogbugba). Ya mere, gbanye testosterone acetate ntụ ntụ bụ ihe na-egbu mgbu mgbe ahụ, nke ọzọ na-agba ọgwụ Testosterone
Raw Testosterone Acetate ntụ ntụ Smmezi
Product Name Raw Testosterone Acetate ntụ ntụ
Chemical Aha androst-4-en-17β-ol-3-otu 17β-acetate, Deposteron; 1045-69-8; Testosterone 17-acetate; Amolisin; Farmatest
Klaasị ọgwụ ọjọọ etrogen na anabolic steroid, ndị na-arụ ọrụ anabolic
molekụla Fnhazi C22H30O4
molekụla Wasatọ 358.4712
Nkịtị Monoisotopic 330.219 g / mol
Mgbu Point 228-230 ° C
Fna-agbanyeghachi Point 2 ℃
Sume 5.43e-03 g / l
Sịkwa akwa Tigwe RT
ngwa Androgen. bodybuilding
Raw Testosterone Undecanoate ntụ ntụ (5949-44-0)